Erdogan ma wuxuu ka guuleystay Donald Trump? - BBC News Somali
Image caption Trump iyo Erdogan
Erdogan oo difaacay duulaanka Suuriya
Erdogan oo digniin culus u diray Yurub
Image caption Kurdiyiinta Suuriya ayaa xulafa la ah Mareykanka
Waxaa Pence garab taagnaa oo hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga, Mevlut Cavusoglu oo weriyeyaasha u sheegay in la hakiyay hawlgalka, balse aysan jirin wax xabad joojin ah, isagoona arrintaas ku sababeeyay in xabad joojin ay gaari karaan laba dhinac oo sharci ku dhisan, oo uu ula jeeday in Kurdiyiinta ay yihiin argaggixiso.
Ujeedka hawlgalka ay u sameyeen ayuu wasiirka sheegay inay tahay sidii aagaas xuduuda looga xoreyn lahaa Kurdiyiinta "argagixisada ah."
Saraakiil haatan xilal ka haya dalka Mareykanka iyo kuwa horay u soo qabtay xilal waxaa ay kasoo horjeesteen heshiiskaas, iyagoona xusay in tallaabadaas ay guul u tahay Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, waxaana ay intaa raaciyeen in taas ay Turkiga u sahleyso in uu isku ballaariyo dhulka ay Kurdiyiinta heystaan.
"Mareykanka waxaa uu sii ansixiyay un qorshaha Turkiga uu isugu ballaarinayo 30 kilomitir oo gudaha Suuriya, taas oo aanan ka turjumeyn xaqiiqda gudaha taala, " ayuu yiri Brett McGurk oo sarkaal hore oo Mareykanka u qaabilsanaa dagaalka ka dhanka ah kooxda ISIS, balse iska casilay xukuumadda Trump.
"Tani waxay si cad uga dhigan tahay in Mareykanka uu xalaaleeyay waxa Turkiga uu sameeyay, una oggolaaneysa inay isku ballaariyaan dhulka Suuriya, barakiciyaanna bulshada Kurdiyiinta", sidaas waxaa wargeyska The Foreign policy u sheegay sarkaal sare oo katirsan xukuumadda Trump oo ka gaabsaday magaciisa.
Sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in tani ay ka dhigan tahay in Turkiga uu ka guuleystay Mareykanka.
Sarkaal sare oo isna katirsan dowladda Mareykanka ayaa wargeyska u sheegay in Mareykanka uusan qeyb ka noqon doonin nabdeynta aaga nabdoon, wuxuuna intaa raaciyay in Mareykanka uu isaga baxay inta badan saldhigyadii uu ku lahaa waqooyiga Suuriya.
Mike Pence ayaa waxaa kale oo uu sheegay in arrintan ay ka tala geliyeen xoogaga Kurdiyiinta, ayna ballan qaadeen inay aqbali doonaan heshiiska, balse xoogaga SDF oo aanan ilaa iyo iminka ka hadlin arrinkan ayaa la aaminsan yahay in aysan aqbali doonin heshiiska ay gaareen Mareykanka iyo Turkiga.
Sarkaal Mareykan ah ayaa sidoo kale wargeyska u sheegay in xoogaga SDF ay aad uga walaacsan yihiin arrintan, maadaama aysan garaneyn waxa dhabta ah ee lagu heshiiyay.
Mareykanka iyo Turkiga ayaa sidoo kale ku heshiiyay in aagaas laga qaado hubka culculus ee ay leeyihiin xoogaga Kurdiyiinta.
Mustaqbalka dhaw, waxaa heshiiskan loo arkaa in uu guul u yahay dalka Turkiga, guuldarana u yahay Kurdiyiinta oo 11 kun oo askari ay kaga dhinteen dagaalka uu Mareykanka dabada ka riixayay ee ka dhanka ahaa kooxda ISIS.
Madaxweyne Erdogan ayaa muddo sanad ah ku taamayay in dhinaca kale ee xadka uu la wadaago Suuriya uu ka sameeyo aag nabdoon oo Ankara ay sheegtay in sidoo kale ay dejin doonta qaxootiga Suuriya ee ku sugan gudaha dalka Turkiga.
Waxaa muuqata in qorshihii Turkiga uu in muddo ah ku taamayay uu haatan hirgalay, kadib markii askarta Mareykanka ay isaga baxeen waqooyiga Suuriya oo ay ku wada sugnaayeen dagaalamayaasha Kurdiyiinta Suuriya.